I-Chalet da Bike-indawo yokusabela kwiofisi ye-wifi yokuloba
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguNelson E Carla Cris
Abantwana kunye ne-PETS abavumelekanga kule ndawo yokuhlala.
Umculo awuvumelekanga, kuphela isandi se-ambient esingaphazamisi ikomkhulu, indlu yayo i-VERY FUTHI.
Amabango avela kwikomkhulu malunga nayo nayiphi na inkxwaleko aya kubangela ukuba kuphume imali ngokukhawuleza.
Yonke indawo iyindawo yangasese kunye neyodwa yokusetyenziswa kweendwendwe zeli gumbi, abantu aba-2 kuphela, ubuninzi) eneneni i-suite enegumbi lokuhlambela ngaphakathi.
kwindawo yangaphandle, inkxaso yekhitshi epheleleyo, ide ibe nentsimbi yentsimbi.
Indawo yabucala, ufikelelo olukhethekileyo, indawo ebanzi nenomtsalane, sisanda kuyilungisa, ihombise yegumbi iselula, yanamhlanje kwaye iyasebenza. Kwigumbi lokulala eline bathroom kukho iSmart TV, Minibar, itafile enezitulo eziy2, plates, cutlery and glasses, quality Wifi. Igumbi lokuhlambela lelanamhlanje, liyakhanya, linomoya kwaye lineshawa, ngalomzuzu umnyango unengxaki kwaye awuvalwa. .
Ifakwe ngaphakathi kweChácara Águas Claras, i-superhost ukusukela ngo-2014.
Indawo yabucala inebalcony enkulu enesinki, isitovu sekhabhathi, imicrowave, intsimbi yentsimbi enesiciko sedamper kunye neekhabhathi ezinempahla yasekhitshini, enetafile, izitulo kunye nesofa, ayinazo iindonga kwaye idityaniswe kakuhle negadi apho undwendwe lunako. ukutshisa ilanga ngasese.
Ukuqinisekisa ubumfihlo bale ndawo ivulekileyo, sibeke iikhethini.
Ubonelelo kwesi sithuba esincanyathiselwe kwigumbi esinalo iSofa, isitovu, isitovu, umgangatho wempahla, izixhobo zasekhitshini, i-microwave, intsimbi yentsimbi yebarbecue yokubhaka.
Ukwenziwa kwendawo :
Imizuzu emi-2 ukuhamba ukusuka kwimarike yaseComoleta.
Imizuzu eli-15 ukusuka e-Atibaia, imizuzu emi-5 ukusuka kwisixeko sasePerdões ngorhwebo olupheleleyo kunye neendawo zokutyela ezilungileyo.
Imizuzu engama-70 ukusuka eSao Paulo, kwisiphaluka esihle phakathi kweentaba namanzi, sikwisixeko saseBom Jesus dos Perdões, kwindawo yaseSerra Negra, iimitha ezili-100 ukusuka kwiSupermarket yaseRômulo, kumda wesixeko saseNazare, 4km ukusuka. Lagoa Encantada kunye 6km evela Cachoeira ukwenza Barrocâo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nelson E Carla Cris
Siyazihlonipha iiprothokholi kwaye sizikhusele kangangoko sinakho, sinxibelelana kuphela ngokuhlonipha umgama kunye nokusetyenziswa kweemaski, kodwa sinokunxibelelana ngoWhatsapp okoko kuyimfuneko, uCarla uyakukhathalela oku ngothando nenkathalo.
Singakwazi ukunika ukutya kwi-suite kodwa kufuneka ulungelelanise imenyu kwangaphambili, sinokunika ukutya okwenziwa kwi-Ranch, i-snacks, i-fondue kunye ne-pizza, ukuba uyi-odole kwangaphambili.
Siyazihlonipha iiprothokholi kwaye sizikhusele kangangoko sinakho, sinxibelelana kuphela ngokuhlonipha umgama kunye nokusetyenziswa kweemaski, kodwa sinokunxibelelana ngoWhatsapp o…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bom Jesus dos Perdões